I-Apple Music iya kuhambelana neKhaya likaGoogle | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Namhlanje, sinabancedisi abohlukeneyo: Umncedisi kaGoogle, uSiri, u-Alexa kunye noBixby, UCortana uhlala ngaphandle kwekhekhe, njengoko kubhengeziwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo sisigantsontso saseRedmond. Umncedisi kuphela okwaziyo ukunxibelelana nabanye ngu-Alexa, owayenza noCortana, kodwa xa eyokugqibela inyamalala izinto ziya ziba nzima.
Kwaye ndiyatsho ukuba iyanzima kuba namhlanje akukho ndlela yokuba kungabikho namnye kubo onokunxibelelana nomnye. Ngethamsanqa, icandelo lezithethi ezikrelekrele liya kwelinye icala, ukusukela kuso nasiphi na isithethi, nokuba sisuka eAmazon okanye kuGoogle, singadlala nayiphi na inkonzo yomculo esasazayo, ngaphandle kweKhaya leKhaya le-Apple ubuncinci okwangoku.
Kwaye xa ndisithi nayiphi na inkonzo yokusasaza umculo, ndibandakanya iApple Music, inkonzo yomculo yokusasaza iApple eqale ukwanda ngasekupheleni konyaka ophelileyo ukuba ifumaneke kwiAmazon Echoes. Kwiinyanga ezimbini, sinokujonga ukuba kwenzeka njani le nkonzo yomculo iya kuhambelana neKhaya likaGoogle.
Ngale ndlela, Ngesicelo seKhaya likaGoogle siya kuba nakho ukonwabela iakhawunti yeApple Music kwisithethi esinobuhlakani kuGoogle. Ukwazi ukuba injani iApple, itsala ingqalelo enkulu, hayi kuphela le ntshukumo, kodwa ngoDisemba ophelileyo, xa ibhengeza ukubakho kwenkonzo yayo yomculo yokusasaza kuluhlu lwesithethi se-Echo. Ikhaya likaGoogle ngoku libonelela ngenkxaso Spotify, Pandora, Google Play Music, YouTube Music kunye neDeezer, eziza kujoyinwa yiApple Music kungekudala.
I-Apple iyazi ukuba ukuba ufuna ukufikelela kubasebenzisi abaninzi ngeenkonzo zayo, kufuneka ivuleleke kwezinye izixokelelwano zendaloUkuhamba siye sabona ngoJanuwari ophelileyo songeza inkxaso ye-AirPlay kwiiTV ezivela kwi-Samsung, LG, Sony kunye neVizio.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Apple Music iya kuhambelana neKhaya likaGoogle